ओठ सिलाएर सरकारको विरोध ! - Everest Dainik - News from Nepal
ओठ सिलाएर सरकारको विरोध !
विश्वमा राजनीतिक विषयलाई लिएर धेरै विवाद तथा विराेधहरू हुँदै आएको छ । यसै क्रममा अफगानिस्तानी महिलाहरूले आफ्नो विरोधलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ शैली अपनाएका छन् ।
राजधानी काबुलस्थित राष्ट्रपति भवनमा ११ जना महिलाले विरोध जनाउँदै आएका हुन् । उनीहरूले चुनावमा भएकाे धाँधलीकाे विरोध जनाउँदै आएका हुन् । जसमा गत मंगलबारदेखि सुरू भएको विरोध कार्यक्रममा सहभागी ११ महिलामध्ये ४ जना महिलाले आफ्नो ओठ सिलाएका छन् । अफगानिस्तानमा पछिल्लो समयमा भएको संसदीय चुनावमा महिलाहरू पराजीत भएसँगै उनीहरू विराेधमा उत्रिएका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस भियाग्राका फाइदा; तालेबानलाई हराउने देखि बाघ संरक्षणसम्म
विरोधमा उत्रिएका महिलाहरूले चुनाव जित्न धाँधली र पैसाको ताकत प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा परेको चुनावी नजिता बदलिदिएको आरोप अहिलेकाे सरकारमाथि लगाएका छन् । विराेधमा सहभागी एक महिलाले सञ्चार माध्यमलाई ओठ सिलाएर विरोध जनाएको जानकारी गराइन । उनले भनिन, ‘विरोध गर्न हामीले एक डाक्टरको सहयोगमा ओठ सिलाएका हौँ ।’
याे पनि पढ्नुस 'डोनाल्ड ट्रम्प'का आमा-बुवालाई यस्तो सास्ती !
विरोधमा सहभागी अर्की महिलाले भनिन, ‘हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ, तर राष्ट्रपतिसँग हाम्रो कुरा सुनिदिने अलिकति समय पनि छैन । जबसम्म हाम्रो कुराको सुनुवाइ हुँदैन, तबसम्म हाम्रो विरोध जारी हुन्छ ।’ उनीहरूले अफगान सरकारद्वारा कमिटी गठिन गरी चुनावमा भएको धाँधलीको जाँच हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, निर्वाचन आयोग र सरकारले महिलाहरूले राखेको मागबारे कुनै ध्यान दिएको छैन । एजेन्सी,नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
याे पनि पढ्नुस यु-१९ विश्वकप: अफगानिस्तानले हरायो पाकिस्तानलाई